Superegg Ny Fametahana Sary Sokitra - Famolavolana
Ny Fametahana Sary Sokitra
Ny Fametahana Sary Sokitra Ny Superegg dia mampiseho ny kapoakan'ny kapoaky ny kafe tokana ampiasaina, izay maneho ny fahafahan'ny olombelona sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Ny fipetrahana miorina eo ambonin'ilay tany, ny endrika endrika geometrika vita amin'ny endriny, araka ny nosoratan'i Gabriel Lame, dia nasiana kapoaka fisotroana kafe namboarina ho tsipika tonga lafatra. Ny traikefa visceral dia manelingelina ny mpijery amin'ny zoro sy halavirana rehetra. Kapoaka 3000 mahery no nangonina tamin'ny alàlan'ny antso amin'ny hetsika sosialy sy ny fokonolona ao an-toerana. Superegg dia mamela ny mpijery hanimba fako sy hampiroborobo ny fahazaran-jiro vaovao.
Anaran'ny tetikasa : Superegg, Anaran'ny mpamorona : Jaco Roeloffs, Anaran'ny mpanjifa : Jaco Roeloffs.
Ny Fametahana Sary Sokitra Jaco Roeloffs Superegg